Burmese Poetry Foundation: October 2010
မူးနေတဲ့ ကြယ်တံခွန် ၃ ပုဒ်
ကဗျာဆရာ ပိုင်စိုးဝေ ရဲ့ ကဗျာ ၃ ပုဒ်ကို burmesepoetryfoundation group မှ အမှတ်တရ
တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်၊ ခေတ်ပေါ်ကဗျာ ခေတ်ဦးကာလကနေ မနေ့တစ်နေ့ကအထိ တောက်လျှောက်
ကဗျာများ ရေးသားလာခဲ့ အစဉ်အလာရှိတဲ့ ကဗျာဆရာတဦးအဖြစ် မမေ့မလျော့ ဖော်ပြရမယ်လို့
ကျက်ထားတဲ့ မီးနင်းတွေ တဖြည်းဖြည်းမေ့ရ။
မယုံကြည်မှုအတွက် စိတ်ကိုစိတ်နဲ့ စီးချင်းထိုးတဲ့
ငါ့နံဘေးက အတူ ချီတက်သူ နီရှေး
ဟိုမှာ ရန်သူရှာနေတဲ့ ပို့စ်မော်ဒန် ဝံပုလွေ တစ်ကောင်
အမှောင်ခေတ်ကြီးထဲက မလွတ်မြောက်သေးတဲ့ မြေခွေးအဖြစ်
ဆောင်းရာသီ နန်းတော်ကို သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြ
ပုဇဉ်းရင်ကွဲတွေက ရင်ကွဲအောင် အော်ကြ
မမြဲခြင်းတရားကို အမြဲတမ်း လက်ကိုင်ထားတဲ့
ဇာတ်သိမ်းခန်း မရောက်ခင် ဇာတ်သိမ်းသွားပေါ့။ ။
(ရနံ့သစ်၊ ဇွန် ၂၀၀၃)
ငါ မကူးခတ်နိုင်လောက်အောင် မကျယ်ဝန်းပါဘူး။
(ဗြူတီ၊ ဇူလိုင် ၂၀၀၃)
ဂီတအကြောင်းဟာလည်း ဂီတ မဟုတ်ဘူး
တစ်ပွင့်ပြီး တစ်ပွင့် သူတို့အကြောင်း သူတို့ပြောရင်း
သစ်ပင်အမြင့်ကြီးတွေပေါ် တက်တဲ့အခါ သတိထား။ ။
ဖော်ပြပါ ကဗျာများကို majestic publishing မှ ၂၀၀၈၊ ဇန်နဝါရီလတွင် ထုတ်ဝေသော
မူးနေတဲ့ ကြယ်တံခွန် ကဗျာစာအုပ်မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
Labels: ကဗျာ, ပိုင်စိုးဝေ
ဝေးမြေရပ်ခြားကိုရောက်တဲ့အခါ ကိုယ့်ဇာတိမြေကို လွမ်းဆွတ်တမ်းတ တတ်ကြတာ လူသားတို့ ဓမ္မတာပေပဲ။
မဲဇာရောက် အမတ်ကြီးက သူ့ရွှေမြို့တော်ကို တမ်းတ ခဲ့တယ်။ “ သည်ဆီ ရွှေမြို့၊ သည်သို့ စေတီ၊ သည်ဆီ
ရွှေနန်း ဖြောင့်တန်းတော့မည် စိတ်က ရည်သည်…” ။ နိုင်ငံရပ်ခြားကို ပညာသင်သွားခဲ့ရတဲ့ မြန်မာစာဆိုကလည်း
“မလာဖြစ်နိုင်ဘု၊ ဝါခေတ် တစ်ခါကုန်တော့၊ မီးရောင်စုံ ကျွတ်သီတင်းကိုလ ရင်တွင်းက ပူဆာဆာ” နဲ့ လွမ်းမိပါ
ဂျမေကားကျွန်းမှာ ၁၈၉၀ ကဖွားခဲ့ကာ ၁၉၁၂ မှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို အပြီးအပိုင် ထွက်ခွာ
သွားပြီး နေထိုင်ခဲ့တဲ့ ကဗျာဆရာ ကလော့ဒ် မကေး ကလဲ သူ့ဇာတိမြေ ဂျမေးကားကို လွမ်းတ မိကြောင်း
ကဗျာတွေ ရေးဖွဲ့ခဲ့တယ်။ အခု ကဗျာဟာ သူ့လွမ်းကဗျာတစ်ပုဒ်ပါ။ ဖတ်ကြည့်ပါဖိ။
ငါ နောက်တစ်ခေါက် ပြန်ဦးမယ်။ ငါ ပြန်မယ်။
နီလာကောင်းကင်ထိ နက်ပြာမီးခိုး သယ်ကာ
ရွှေမွန်းတည့်ချိန် တောမီးတို့ လောင်တာကိုကွယ်
အံ့သြမျက်လုံးနဲ့ ကြည့်၊ ချစ်၊ ရယ်မောဘို့သာ။
ကိုင်းညွတ် မြက်ပင် ရွက်ညိုတို့ကို ဆွတ်ဖြန်းတဲ့
ချောင်းနဘေး ဖင့်နွဲလူးလာဖို့ ငါ ပြန်မယ်။
တောင်ကြားက တစ်အားဆင်းတဲ့ ရေလျဉ်ရဲ့
အိပ်မက်တစ်ထောင် အကောင်အထည် ဖော်ဦးမယ်။
ဝိုးဝါး မန္တရားရဲ့ ကြိုးကျား ဂီတ၊
တိုင်းရင်းဘဝ နက်ရှိုင်းမှုများ လှုပ်ဆွတဲ့
ချစ်ရတဲ့၊ ချိုမြိန်တဲ့ တေး၊ ကျေးလက် အက
တယော-ပလွေသံ နားဆင်ဖို့ ငါ ပြန်မယ်ကွဲ့။
ငါ ပြန်မယ်။ ငါ နောက်တစ်ခေါက် ပြန်ဦးမယ်။
နှစ်ရှည် ဝေဒနာ ငါ့ စိတ်က ပြေဖို့ကွယ်။
Labels: ဘာသာပြန်ကဗျာ, မောင်သာနိုး
I shall return again, I shall return
To laugh and love and watch with wonder eyes
Wafting their blue-black smoke to sapphire skies,
I shall return, I shall return again.
Labels: English Section, poetry, မောင်သာနိုး
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ထိပ်ပုတ်
မြက်ခင်းစိမ်းစိမ်းတွေ ဖုံးနေတဲ့ မြေပုံမို့မို့
အဲ့ဒီမှာ မြှုပ်ခဲ့တာပေါ့။ ။
IMAGE မဂ္ဂဇင်း ဇန်နဝါရီ ၂၀၀၃
Labels: ကဗျာ, သစ္စာနီ
get down the head
also to down the flower(tail)
just asacoin.
how they search for peace and cause is
subduing the wind's motion
patting each others head
so ring recipes
how to search peace and cause is
changing the weather appearance
fanning the distress
to paddle at one bend
in searching peace and source
applying colour glass on eyes of
forging cardinals and figures
expecting ceremonial festivities and on
there been burried.
translated by Mg. Hmyar
Labels: English Section, poetry, သစ္စာနီ
ညမှာ ပင်လယ်၊ အားလုံး မည်းနက်
ကောင်းကင်ကတော့ ခွဲလို့ရ၊ အားလုံးမည်းနက်။
ပင်လယ်အထက် ကပ်ရက်၊ ထောင်လိုက် တံစဉ်
လ အထက် တည့်တည့်မှာက
ဂန္ဓမာ ဝါဝါ ကြယ်၊
အားလုံး မျဉ်း တစ်ဖြောင့်တည်း
ဒီတော့ ငါတို့ တွေးမိ ဒါ ညတိုင်း
ဖြစ်သလား၊ နှစ်တစ်ရာမှ တစ်ကြိမ်လား
ငါတို့တွေးမိ၊ အဲဒီ အချိန်
ပင်လယ် ယိမ်းလှုပ်၊ ကောင်းကင် ရွှေ့ပြောင်း
လ လှည့်ကွေ့၊ ကြယ် ချော်လဲကျ
အချိန်မရ၊ ဒါနဲ့ ကြည့်နေကြရ
စကားပြော ရပ်မပစ်နိုင် .....
"မျောက်အရိပ်များ" ၊ ၁၉၉၁
မောင်သာနိုး ဆွတ်ပျံ့ဖွယ်အောင် စာအုပ်မှ
The sea at night, all black
yet distinguishable from the sky, all black,
Close above the sea:avertical sickle
a flame yellow waxing moon:
a chrysanthemum yellow star,
So we wondered if this happens
every night or onceacentury,
We wondered while
the sea swayed, the sky shifted
the moon turned, the star slipped
no time, so we watched
sleepless through the night,
unable to stop talking...
Monkey Shadows, 1991
ကဂျိုးကဂျောင် ဟိုကောင်ဝတ်လာတဲ့ တီရှပ်ဟာ ငါ့အပြာ
ရောင် တီရှပ်ပဲ ။ တံဆိပ်နဲ့ စာတန်းနဲ့ [ စာတန်းက Boney’m
ရဲ့ slogan ကို ကူးရေးထားတာ ] Love For Sale တဲ့ ။
အသက်အရွယ် ကိုမှ မထောက် မျက်နှာပြောင်ပြောင်နဲ့။
ဒီကောင် ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်မှာ မိတ်ဆွေတစ်ယောက် မတိုး
ဘူး ။ တွဲနေကျထဲက သုံးယောက် ခွာသွားတယ် ။ လက်ဖက်
ရည်ဆိုင်မှာ သူ တစ်ယောက်တည်း ။ ထိုင်ရင် ဒူးချိတ်တယ် ။
ထရင် ခါးထောက်တယ် ။ စိတ်ပါရင် ကဗျာ ရေးတယ်။ ခပ်တည်
ပေါ့သေးသေး မဟုတ်ဘူး။ ‘သူနဲ့တန်းတူတာ ကမ္ဘာမှာကို
ရေ လိုက်ရင် လက်နှစ်ဖက် မပြည့်ဘူး ’ လို့ အမြဲစဉ်းစားတယ် ။
အချိန်ပြည့်ကို စဉ်းစားတာ။ ငါ သိတာပေါ့ကွာ ။ အဲဒါ ရယ်စရာ
လိုလို ၊ ငိုစရာ လိုလို။
ဒါပေမယ့် သူ့မှာ အခိုင်မာဆုံး သူငယ်ချင်း၊ ရဲဘော် နှစ်
ယောက်ရှိတယ် ။ ကိုယ့် မိန်းမနဲ့ဆို သုံးယောက်ပေါ့၊ ငွေယူသုံး
တယ်။ ဆာရင် တယောက်နဲ့ တယောက် စားတယ်။ ရန်ဖြစ်လို့
ရတယ်။ အခြားသူတွေကို တစက်မှ အထင်မကြီးဘဲ နေလို့ ရ
တယ်။ ဟား လို့ရတယ် ။ သနားလို့ ရတယ် ။ အနုပညာ ကို
ကြီးကြီးချစ်ခဲ့တယ်။ ဟော.. ။ အခု ဟို ကဂျိုးကဂျောင်ကောင်
လမ်းကူးလာပြီ။ ငါ ရေးနေတဲ့ကဗျာကို လက်စသတ်မှ ။
ငါတို့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ကိုးကားလို့
Labels: ကဗျာ, အောင်ချိမ့်
Favourite Poet 1
Ungainly, the T-shirt the guy’s on is my blue one.
The logo and the slogan – [copied from Boney’m]
Love For sale. He’s no regard for his age, how
This guy has not addedafriend in ten years. Three
who used to be with him left him. He’s alone in the
tea shop. When he sits, he always has his knees
crossed. When he rises, he has his arms akimbo.
when he is in the mood, he writes poems. Quite
serious he looks, man.
Not one to be slighted. His peers can be counted
on one hand, he always thinks. Thinks the whole
time. I know this, dear. This sounds something to
laugh at or cry about.
But he has two steadfast friends or comrades.
Three, if you count my wife. Takes money to spend.
If hungry, eats from each another. Can pickaquarrel.
Can laugh it out. Can feel sorry. Has loved art greatly.
Now that ungainly guy is coming across the street.
I’d better finish the poem I am writing.
We quote one another and
Aung Cheimt July 2005
Labels: English Section, မောင်သာနိုး, အောင်ချိမ့်
ကိုယ်ခွဲ/ကွဲ ကဗျာများအကြောင်း - အပိုင်း ၃
ငြိမ်းအေးအိမ် ကိုယ်ခွဲ/တွဲ ကဗျာများအကြောင်း ဆက်ဖတ်ရန်..
အဲဒီစာအုပ်ထဲမှာပဲ ထပ်တွေ့ရတဲ့ သူ့ကဗျာတစ်ပုဒ် အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်။ ''အခက်ကြီးထဲ ခုန်ချ'' ဆိုတဲ့ ကဗျာပါ။ အဲဒီကဗျာကိုတော့ အစိတ်အပိုင်းသုံးလေးခုကို ဘော်ဒီတစ်ခု တည်းမှာ တပ်ဆင်ထားတယ်လို့ ခံစားရပါတယ်။ ပင်မကိုယ်ထည်တစ်ခုထဲက မတူတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို တပ်ဆင်ထားတာပါ။ အစီစဉ်တကျ မြင်သိ လွယ်အောင်တပ်ဆင်ထားတာမျိုးမဟုတ်လေတော့ နည်းနည်းတော့ အာရုံစိုက်ရပါတယ်။ အချိန်ကဗျာတုန်းကလိုပဲ အတတ်ပညာကို အသုံးချ ခဲ့တာတွေ့ရပါမယ်။
ရုပ်ရှင် ကားတွေမှာမြင်ကွင်း သုံးလေးခုကို တဖြတ်ဖြတ်နဲ့ ကူးပြောင်းပြီး အမြန်ပြသွားပုံမျိုးပါ။ စိတ်ခံစားမှုတွေ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဆူဆူဝေဝေဖြစ်ပုံမျိုးပေါ်လွင်ဖို့အတွက် သူ အခုသုံးပြသွားတဲ့နည်းစနစ် ဟာ အလွန်အစပ်ဟပ်တည့်ခဲ့ပါတယ်။
(၂) မီးသင်္ဂြိုလ်စက်ထဲ အထည့်ခံ လိုက်ရပြီဖြစ်တဲ့ (သေဆုံးပြီး) မောင်ချောနွယ်။
(၃) ကြေကွဲမှု၊ ရှုတ်ထွေးမှုနဲ့ စိတ်အခက်အခဲကို အကြီးအကျယ်ကျော်ဖြတ်နေရတဲ့(ကဗျာဆရာ)မောင်ပြည့်မင်း။
(၄) ရေဆူ မီးပျောက်ပြီး ချူခြာနေတဲ့ မော်တော်ကားတစ်စီး တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကဗျာဆရာဟာ သူ့ကဗျာ တစ်ပုဒ်လုံးကို ဒီလိုပုံစံနဲ့ ရေးဖွဲ့ပြခဲ့ပါတယ်။ ဖတ်ရတာ နည်းနည်းတော့ ခက်ပါတယ်။ သူပေးလိုတဲ့အနက်က ဒက်ကနဲ ရောက်မလာပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဂရုစိုက်ဖတ်တဲ့ အခါ ဗလောင်ဆူနေတဲ့ ကဗျာဆရာရဲ့ ရင်ကို တွေ့ရမှာပါ။ ဒီလိုရေးဖွဲ့ ခဲ့ပါတယ်။
အပေါ်သွေး တစ်ရာ့လေးဆယ်၊ အောက်သွေး တစ်ရာ
ပလပ်တွေ လဲရမယ်၊ မီးပျောက်ပျောက်သွားလို့
မနက် မနက် တွန်းနှိုးနေရတယ်
သွေးတွေ သိပ်တိုးနေလား မသိဘူး
မိုက်ခနဲ မိုက်ခနဲ ဖြစ်ဖြစ်သွားလို့
မောင်ချောနွယ် တစ်ခါတလေ ဒုက္ခတွေ့တယ်
မောင်ချောနွယ် တစ်ခါတလေ အရက်မူးတယ်
အလောင်းထုပ်ထားတဲ့ အဝတ်ဖြူကို ဖြည်ပြတော့
သူ့ခေါင်းလေး လည်ကျလာတယ် မောင်ချောနွယ်။
ရေတိုင်ကီ ဘာဖြစ်လို့ ရေဆူဆူနေတာလဲ
ကိုယ်ပူလိုက်တာ တစ်ရာ့သုံး၊ တစ်ရာ့လေး
အဖျား တစ်ခါမှ မကျသေးဘူး
တချို့ သူမသေခင်ကတည်းက သစ္စာဖေါက်ခဲ့ကြ
တချို့ သူသေပြီးမှ သစ္စာဖေါက်လိုက်ကြ
''လူ တစ်ယောက်လုံး ထားခဲ့ရပြီးမှ
ဒီစောင်လေးကို ပြန်မယူတော့ပါဘူး'' တဲ့
ကဗျာဆရာတွေ ငိုကြ၊ တစ်ယောက်တစ်ယောက် လှမ်းကြည့်ကြ
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် တားကြ၊ ဆွဲကြ၊ တွဲထူကြ
(မောင်ပြည့်မင်းဟန်သစ်၊ ၂ဝဝ၄၊ အောက်တိုဘာ။)
ဒီကဗျာထဲမှာ မသေသေးတဲ့ ဆေးရုံပေါ်ကမောင်ချောနွယ်ရဲ့ စကားသံတွေကိုကြားကြရပါလိမ့်မယ်။ စာပိုဒ်တွေကို တစ်စစီ လိုက် ကောက်ပြီး ဆက်ကြည့်ပါ။ နားထောင်ကြည့်ပါ။ အဲဒီအသံတွေကို ကဗျာ ဆရာက ကဗျာတစ်ပုဒ်လုံးရဲ့ ဟိုနားဒီနားတွေမှာ ထိုးညှပ် စပ်ဆိုခဲ့ပါ တယ်။ အဆက်အစပ်တွေကို တစ်စစီ နွှာထားပါတယ်။ သူ့ ညှပ်စတွေကို လိုက်ကောက်ဆက်လိုက်တော့ ခုလို မြင်ရ ကြားရပါလိမ့်မယ်။
''မောင်ချောနွယ် မသေဘူးတဲ့''။ အကြောဆေးထိုးရမယ်။ အပေါ်သွေး တစ်ရာ့လေးဆယ်၊ အောက်သွေး တစ်ရာ။ သွေးတွေ သိပ်တိုးနေလား မသိဘူး။ မိုက်ခနဲ မိုက်ခနဲ ဖြစ်ဖြစ်သွားလို့။ ကိုယ်ပူ လိုက်တာ တစ်ရာ့သုံး၊ တစ်ရာ့လေး။ အဖျား တစ်ခါမှ မကျ သေးဘူး။ အသက်ရှူလိုက်ရင် ဘယ်ဘက်ရင်ဘတ်က အောင့်အောင့်နေလို့။ လမ်းလျှောက်လို့မကောင်းဘူး။ ညာဘက်တစ်ခြမ်းလုံး ဆွဲဆွဲနေလို့။
ကဗျာဆရာဟာ သူ့အတွေးထဲမှာ မောင်ချောနွယ်ကို မသေစေချင်သေးလို့ မသေသေဘူးလို့ သူ့ကိုယ်သူ လိမ်ညာခံစားထား ပေမယ့် တကယ့်အဖြစ်မှာ သေပြီးခဲ့ပြီ။ ဒါကိုလည်း သူကိုယ်တိုင် မြင်/ကြားခဲ့ရပြီးပြီ။ ဒီအကြောင်းကို ခုနကအတိုင်းပဲကဗျာကိုယ်ထည် ရဲ့ ဟိုကြားဒီကြားမှာ ထိုးသိပ်စပ်ဆိုခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ ကဗျာဆရာ ရုပ်ဖျက်ဖုံးဖိထားတဲ့အဖုံးကို ဖွင့်လှန်ကြည့်တဲ့အခါ သေဆုံးနေပြီဖြစ်တဲ့ မောင်ချောနွယ်ရဲ့ မြင်ကွင်းကို ခုလိုတုန်လှုပ်ခြောက်ခြားစွာ ကြေကွဲဖို့ ကောင်းအောင် တွေ့ရပါတော့တယ်။
မောင်ချောနွယ် (၁၉၄၉၊၂ဝဝ၂)။ မောင်ချောနွယ်သေပြီ။ သူ့အလောင်းကို မီးသင်္ဂြိုလ်စက်ထဲထည့်တာငါကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်တယ်။ သူရှိစဉ်က သူ့ရန်သူတွေကို။ အရက်ဆိုင်စားပွဲနောက် အကာအကွယ်ယူ လို့ တဖောက်ဖောက်ပြန်ပစ်ခဲ့တယ် မောင်ချောနွယ်။ မောင်ချောနွယ် တစ်ခါတလေဒုက္ခတွေ့တယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ဒုက္ခတွေ့ချင်ယောင် ဆောင်တယ်။ မောင်ချောနွယ် တစ်ခါတလေအရက်မူးတယ်။ တစ်ခါ တလေ အရက်မူးချင်ယောင်ဆောင်တယ်။ တစ်ခါတစ်လေ သေချင် ယောင်ဆောင်တယ်။ အလောင်းထုပ်ထားတဲ့ အဝတ်ဖြူကို ဖြည်ပြတော့သူ့ခေါင်းလေး လည်ကျလာတယ် မောင်ချောနွယ်။ တချို့ သူမသေခင် ကတည်းက သစ္စာဖေါက်ခဲ့ကြ။ တချို့ သူသေပြီးမှ သစ္စာဖေါက်လိုက်ကြ။ရေခဲတိုက်ရှေ့မှာ ''လူ တစ်ယောက်လုံး ထားခဲ့ရပြီးမှ၊ဒီစောင်လေးကို ပြန်မယူတော့ပါဘူး'' တဲ့။မမမြင့် ငိုရှာတယ်။ မောင်ချောနွယ် အသုဘကဗျာဆရာတွေ ပို့ကြတယ်။ ကဗျာဆရာတွေ ငိုကြ၊ တစ်ယောက် တစ်ယောက် လှမ်းကြည့်ကြ။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် တားကြ၊ ဆွဲကြ၊ တွဲထူကြ။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ရန်ဖြစ်ကြ။သွေးထွက် သံယို ဖြစ်ကြ။ နောက်ဆုံးမှာ ဘာသံကြီးလဲမသိ ဝိုင်းအော်လိုက်ကြတယ်။ မောင်ချောနွယ် (၁၉၄၉-၂ဝဝ၂)။
နာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့ မောင်ချောနွယ်၊ သေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ မောင်ချောနွယ် အကြောင်းပြောနေ၊ တွေးနေရာကနေ ကားပျက် တစ်စီး က ဘယ့်နှယ် ပါလာရတာတုန်းလို့မေးရင် ကဗျာဆရာက ဘာပြန်ဖြေ မလဲမသိပေမယ့် ဒီကဗျာမှာ ကားပျက်တစ်စီး အသေအချာ ပါခဲ့ပါတယ်။ ကားပိုင်ရှင်နဲ့ မက္ကနစ်တို့ရဲ့ အပြန်အလှန်ပြောဆိုသံနဲ့ ချူခြာနေတဲ့ ကားတစ်စီးရဲ့ အခြေအနေကို ဒီစာသားတွေက ဖေါ်ပြ နေပါတယ်။ မသေဆုံးမီ (ကျန်းမာရေးဆိုးရွားနေတဲ့) မောင်ချောနွယ်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် တစ်ခုလုံးဟာ ဒီကားပျက်ကြီးလိုပဲ ယိုယွင်းနေခဲ့တာလို့ ဆိုလိုချင် တာလား။ ကားတစ်စီးလို အပိုပစ္စည်း၊ လိုတာလဲလို့ရရင် လဲပစ်ပြီး မောင်ချောနွယ် ရဲ့ အသက်ဇီဝကို ဆက်ပေးလိုက်ချင်တာလား။ သူ့ကား (ကဗျာထဲကကား) ကတော့ ရစရာ မရှိလောက်အောင် ယိုယွင်းနေပါ တော့တယ်။
ဝါယာရင်းတွေမှားနေတယ်။ ပလပ်တွေလဲရမယ်၊ မီး ပျောက်ပျောက်သွားလို့။ မနက် မနက် တွန်းနှိုးနေရတယ်။ ဘက်ထရီ ခေါင်းတွေ ဖြုတ်ဆေးလိုက်။ ရေတိုင်ကီ ဘာဖြစ်လို့ ရေဆူဆူနေတာလဲ။ ဝါးတားပိုက်တွေ ပိတ်နေလို့လား။ ကာပရိုက်တာ မကောင်းဘူး။ တံခါး ဟာနေတာ။ ဒူးဆစ်တွေ လဲပစ်ရမယ်။ ပင်နီယံတွေလဲလိုက်။
သူဟာ ဘယ်လောက်တောင် ဂယောင်ခြောက်ခြားဖြစ်နေလဲ ဆိုတာကို သူ့ကဗျာထဲက ဒီစာသားတွေကို အကြိမ်ကြိမ်အထပ်ထပ် ဖေါ်ပြရင်းနဲ့ သူ့ခံစားမှုကို ညွှန်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ မောင်ချောနွယ်သေဆုံးမှု အပေါ်မူတည်ပြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန်တုန်လှုပ်နေတဲ့ ကဗျာဆရာရဲ့ စိတ်ကစင့်ကလျားလို့ ပြောရမယ်ထင်ပါတယ်။
ငါမနေနိုင်တော့ဘူး။ အခက်ကြီးထဲ ခုန်ချ။ ငါ မနေနိုင်တော့ ဘူး အခက်ကြီးထဲခုန်ချ။ငါ မနေနိုင်တော့ဘူး။ အခက်ကြီးထဲခုန်ချ။ ငါ မနေနိုင်တော့ဘူး အခက်ကြီးထဲ ခုန်ချ။ငါ မနေနိုင်တော့ဘူး။ အခက်ကြီးထဲ ခုန်ချ။ဒီနေရာမှာ ငါမနေနိုင်တော့ဘူး။ အခက်ကြီးထဲ ထိုးချလိုက် တော့မယ်။
မတူတာတွေကို တစ်နေရာတည်းမှာ ပေါင်းရုံးစုစည်းပြီး ရေးကြ၊ ဖွဲ့ပြကြတဲ့ နည်းနာတစ်ခုလို့ ဆိုရင် ရကောင်းပါရဲ့။ သူ ဘယ်လို ရေးခဲ့ပါလိမ့်လို့ စဉ်းစားချင်လည်း ရပါတယ်။ ဥပမာ၊ အခြေအနေတစ်ခု စီကိုရေး ပြီးမှ အဲဒီက တစ်ကြောင်းခြင်းစီကို ဟိုတစ်ကြောင်း ဒီတစ်ဖြတ် ဆက်စပ်လိုက်တာလား။ ဒါမှမဟုတ် တစ်ဆက်တည်းရေးနေရင်း အတွေးက ဟိုတစ်စ ဒီတစ်ပိုင်း ဝင်လာတာလား၊ စသဖြင့်ပေါ့။
ဆရာသစ္စာနီကတော့ စာလုံးတွေရေးထားတဲ့ အံစာတုံးတွေကို လှိမ့်လှိမ့်ပြီး ကဗျာရေးပြမယ်လို့ ကြွေးကြော်ထားပါတယ်။ ဆရာချောနွယ် ကိုယ်တိုင်က ခုတ်သားစများဆိုပြီး ရေးထားတာရှိပါတယ်။ ဆရာ စိုင်းဝင်းမြင့်က လည်း တစ်ကြောင်းရရ၊ တစ်စရရ ပေါ်သမျှလေးတွေ ရေးတို့ထားပြီး လိုသလို ဆက်စပ်ယူတဲ့နည်းနဲ့ ရေးဖြစ်တာများကြောင်း ပြောထားတာ တွေ့ရပါ တယ်။ ဆရာဇေယျာလင်းဆီမှာလည်း အဲသလို မျိုးတွေတွေ့ရပါတယ်။ ဘယ်လိုရေးမှ ကဗျာလားမြောက်မယ်ဆိုတဲ့ အခြေခံဥပဒေသ ဆွဲပြ မထားလေတော့ ဒီကိစ္စ သိပ်တော့လည်း ပြဿနာမရှိပါ။ ကိုယ့်မူနဲ့ကိုယ်၊ ကိုယ့်အရပ်နဲ့ ကိုယ့်ဇာတ်ပါပဲ။ မြန်မာ ကဗျာလောကမှာ ဒါမျိုး တစ်ကျောင်းတစ်ဂါထာလုပ်လို့မဖြစ်ဘူး၊ ကဗျာဆိုရင် ဒီလိုလေးတွေပါမှ ရမယ်၊ ခုလိုဖွဲ့မှ ကဗျာဖြစ်မယ်ဆိုပြီး အခြေခံမူများဆွဲချင်သူရှိရင် ဆွဲကြပါ။ ကဗျာဆရာဆိုတဲ့အမျိုးအစားက တော့ လိုက်နာကြလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်ဖြင့်မထင်ပါ။
လှိုင်ထိပ်ခေါင်တင်ခေတ်တုန်းက ''သုံးချက်စည်တော်၊ ရိုက်ဆော်ကာ ညင်းတယ်လေး'' ကိုဖွဲ့ဖို့ ဖြတ်သားစတွေကို တစ်ခုချင်း ကောက် ဆက်တဲ့နည်းကို သုံးခဲ့ပုံမပေါ်။ နတ်ရှင်နောင်၊ နဝဒေးတို့လည်း ဒီနည်းလမ်းကိုတွေးတောခဲ့မည်မထင်။ ကြည်အေးရဲ့ တစ္ဆေနဲ့ ဒဂုန်တာရာရဲ့ တဟီတီအထိ ''ဖြတ်သားဆက်တင်''နဲ့ပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ လက်စလက်နတွေ မတွေ့ခဲ့ရ။
ဒီကနေ့ရေးဖွဲ့နေကြတဲ့ ကဗျာပုံစံပေါင်းများစွာထဲက ဖွဲ့နည်း ပုံစံလေးတစ်ခုအကြောင်း ပြောကြည့်တာပါ။ စကားပြေဖြစ်တယ်၊ ကဗျာ ဖြစ်တယ်။ သဒ္ဒါမှားတယ်၊ မှန်တယ်။ ဒေါသသင့်တယ်။ ဂုဏ်မြောက်တယ်။ ရစ်သမ်မဲ့တယ်၊ ကာရံပဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ငြင်းသံခုန်သံတွေကြား မှာပဲ ကျွန်တော်တို့ ဦးဏှောက်စားရမယ့် ရေးဖွဲ့နည်းပုံစံသစ်တွေ ဆက်လက်ထွန်းကားနေဦး မယ်ထင်ပါတယ်။
ဒီလိုနည်းနဲ့ပဲ ကဗျာဟာ ခရီးမိုင်ပေါင်းများစွာ ရွေ့ခဲ့ပြီးပါပြီ။
ပင်လယ်ဘယ်ဆီမှာမှန်းမသိပေမယ့် မြစ်ရေကတော့ စီးမြဲပါပဲ။
၂ဝဝ၆ခု နိုဝင်ဘာ (၂၅) (ဝ၃း၁၅)နာရီ။ ရန်ကုန်။
တစ်ကိုယ်တည်းက နှစ်ကိုယ်သုံးကိုယ်ကွဲနေတဲ့၊ ဒါမှမဟုတ်၊ နှစ်ကိုယ်သုံးကိုယ်ကိုပေါင်းပြီး ဘော်ဒီတစ်ခုတည်း ထုထားတဲ့ ကဗျာလေး တစ်ချို့အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်။ တွေ့မြင်မိသမျှကဗျာများအားလုံးကို တင်ပြဖို့ မရည်ရွယ်ပါ။
အဲသလိုကွဲတော့ဘာဖြစ်သလဲ။ ဘာရေးနည်း ခေါ်သလဲ။ ဘယ်မျိုးတူစုထဲမှာ ထည့်မလဲ။ အဲဒီကဗျာများရဲ့ လားရာက ဘယ်လဲ။ ဒီလိုရေးဖွဲ့တဲ့အတွက် ဘာသက်ရောက်မှုရှိလဲဆိုတဲ့ ပညာရပ် ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးမှုတွေဆီအထိ သွားဖို့လည်း မရည်ရွယ်ပါ။ တွေ့ခဲ့တာလေးကို မှတ်တမ်းတင်ရုံ သက်သက်ပါ။
ဂန္ထဝင်၊ ခေတ်စမ်း၊ ခေတ်ပေါ်၊ ခေတ်ပြိုင်၊ မိုးဝေခေတ်၊ မော်ဒန်၊ ပို့စ်မော်ဒန်၊ ကာရံ၊ ရစ်သမ်၊ နမိတ်ပုံ၊ သင်္ကေတ၊ အကြောင်း အရာ၊ ပုံသဏ္ဍာန်၊ အဘိဓမ္မာမဲ့ မမဲ့ ၊ အယ်လ်ပီကဗျာ ဘယ်သို့ ဘယ်ညာ စသဖြင့် ကဗျာမှုဝန်းကျင်မှာ အမျိုးအစားခွဲမှု၊ သတ်မှတ်မှု၊ ဝေဖန်ပိုင်းခြားမှု၊ လေ့လာစောင့်ကြည့်မှု၊ မှတ်တမ်းတင်မှုတွေ အတော မသတ်ဖြစ်နေဆဲမှာပဲ ကဗျာ ဆရာဆိုတဲ့လူတွေကလည်း ကဗျာရေးပုံ တွေကို သူတို့စိတ်ကြိုက် ဆက်လက် ဖန်တီးနေတုန်းပါပဲ။ စိတ်ထင်ရာ လုပ်နေကြတုန်းပါပဲ။ ဘယ်စည်းမျဉ်း ဘယ်အကန့်အသတ် အောက်မှာမှ အသေလို မနေလိုသူတွေထဲမှာ ကဗျာဆရာဆိုတာ ထိပ်ဆုံးကရှိနေ တတ်ကြတာမို့ပါ။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဘာတွေပဲလုပ်လုပ် အသစ်ပေါ် လာမှုတွေ အပေါ်မှာ ငြင်းဆန်သူ၊ ထောက်ခံသူ၊ ကန့်ကွက်သူ၊ ကြိုဆိုသူ၊ စောင့်ကြည့်သူ၊ ဘုတောသူတွေနဲ့ ကဗျာမြို့တော်ကြီးကတော့ စည်ပင် ဆဲပါပဲ။
၂ဝဝ၆ခု နိုဝင်ဘာရဲ့ ပိတောက်ပွင့်သစ် မဂ္ဂဇင်းမှာ ကဗျာ တစ်ပုဒ်ဖတ်ရပါတယ်။ ကဗျာဆရာ မောင်နီမွန်ရဲ့ ''လေယာဉ်ပျံနဲ့ တောကဗျာဆရာ'' ဆိုတဲ့ကဗျာပါ။ အဲဒါကို ဖတ်မိတဲ့အခါ ကျွန်တော့် အတွေးထဲမှာ ''လေယာဉ်ပျံ'' နဲ့ ''တောကဗျာဆရာ''ဆိုတဲ့ ကဗျာလေး နှစ်ပုဒ် အဖြစ်ကွဲထွက်လာပါတယ်။
သတ္တုစပ်တောင်ပံနဲ့ ပျံသန်းနှစ် ၂ဝကျော်ပေါ့
ဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချစွာ ကူးလူးပျံသန်းမှု ပြီးဆုံးသွားတော့ကာ
ဆရာအဖြစ် ထူထောင်နေသူ မောင်နီမွန်
မှော်သားတောင်ပံနဲ့ ပျံသန်းနှစ် ၅ဝလျော့လျော့
ချစ်ခြင်းတွေ သယ်ပိုးဆောင်ယူ ဖြန့်ဝေပြီးတော့ရာ
ဒါ ကျွန်တော့်စိတ်ကူးထဲမှာ ဖတ်လိုက်ရတဲ့ ကဗျာလေး နှစ်ပုဒ် ပါ။ စာမျက်နှာပေါ်မှာတော့ အဲဒီနှစ်ပုဒ်ကို ခုလိုတင်ဆက်ထားတာ တွေ့ရ ပါတယ်။ တစ်ပုဒ်တည်းသော ကဗျာအဖြစ်ပါ။ လေယာဉ်ပျံနဲ့ တောကဗျာ ဆရာရဲ့ အပြန်အလှန်စကားပြောဒိုင်ရာလော့ခ်အဖြစ်နဲ့ပုံဖေါ်ထားပါ တယ်။ ပြဇာတ်တစ်ပုဒ်အရေးအသား၊ ဖွဲ့စည်းမှုနဲ့ ဆင်တူပါတယ်။
၂ဝဝ၆ခုနှစ်ကဗျာဖတ်သူတွေအနေနဲ့တော့ ဒါကဗျာမဟုတ်ဘူး လို့ ငြင်းခုန်သူမရှိလောက်တော့ဘူးထင်ပါရဲ့။ လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်လောက် ကတော့ ကဗျာဆရာအောင်ဝေးတစ်ယောက် ဒီလိုဆန်ဆန် ရေးခဲ့တဲ့ 'ဒိုင်ရာရီ' ဆိုတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်နဲ့ ပွက်လောညံခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကဗျာဆရာ ကတော့ အဲဒီကဗျာကြောင့်၊ သူဟာ လူစင်စစ်ကနေ အာလူးတစ်အိတ် ဖြစ်သွားခဲ့ရဖူးကြောင်း စာမျက်နှာပေါ်မှာ ညည်းညူရှာဖူးခဲ့ပါရဲ့။
ခင်ဗျား ဒေတာပျံသန်းရေးရဲ့ ဝိညာဉ်
ကျွန်တော် ကဗျာဆရာအဖြစ် ထူထောင်နေသူ မောင်နီမွန်
ခင်ဗျား လေယဉ်ပျံဆိုမှတော့ ပိုမြန်တယ်
ခင်ဗျား သတ္တုစပ်တောင်ပံနဲ့ ပျံသန်းနှစ် ၂ဝကျော်ပေါ့
ကျွန်တော် မှော်သားတောင်ပံနဲ့ ပျံသန်းနှစ် ၅ဝလျော့လျော့
ခင်ဗျား ဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချစွာ ကူးလူးပျံသန်းမှု
ကျွန်တော် နိမ့်ချည်မြင့်ချည် ငှက်ခါးတစ်ကောင်လိုပျံသန်း
ပုခုံးနိမ့်နိမ့် တောမြို့လေးထဲမှာ။ ။
အခုတင်ပြခဲ့တဲ့ ကဗျာထက် စောစီးစွာ နှစ်ကိုယ်ခွဲလိုက် တစ်ကိုယ်ပူးလိုက်ကဗျာတွေကို ဆရာမောင်ပြည့်မင်း လုပ်ခဲ့တာ တွေ့ရ ပါတယ်။ ဒီ့ထက်စောတာတွေ ရှိမရှိတော့ စုံစိအောင် လိုက်ဖတ်မထား မိတဲ့အတွက် ကျွန်တော် မပြောတတ်ပါ။ ရှိလိမ့်ဦးမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ခု ဖေါ်ပြမယ့် ကဗျာတွေကို စိုင်းဝင်းမြင့်ရဲ့ 'ခေတ်ပေါ် ကဗျာအဖွင့်' (စိမ်းညက်စာပေမှ ၂ဝဝ၅၊ သြဂုတ်လ၊ပထမအကြိမ်ထုတ်) စာအုပ်ကယူပါတယ်။
(ငြိမ်းအေးအိမ်၏ facebook စာမျက်နှာပေါ်မှ ကူးယူ ဖော်ပြသည်)
ငါဟာ ခွေးပိန်၊ ခွေးထက်၊ ခွေးရိုင်း၊ တစ်ကောင်တည်းရယ်၊
ငါဟာ ခွေးကြမ်း၊ ခွေးမာ၊ ငါ့ဘာသာ အမဲလိုက်တယ်
ငါဟာ ခွေးဆိုး၊ ခွေးရူး၊ သိုးအ တွေကိုစရဲ့။
ငါ ထိုင်၊ လကို အူ၊ လူဝတွေ အိပ်ပျက်စေတာ ချစ်သကွယ့်။
ငါဟာ ခြေညစ်တွေ ရက်ပေးတဲ့ ခွေးပျက်မဟုတ်။
အသားအတွက် အောက်ကျို့တဲ့ ခွေးပျော့၊ ခွေးညံ့မဟုတ်။
မီးဖိုလဲ ငါ မလို၊ အစာပြည့်ခွက်လဲ ငါ မလို၊
တံခါးပိတ်၊ ခဲနဲ့ပေါက်၊ ရိုက်ဟယ်၊ ကန်ဟယ်၊ မုန်းဟယ် မလို။
ငါ့ဘေး တခြားခွေးတွေ ပြေးတာ ငါ့ဖို့ မဟုတ်သပ၊
တချို့ ခဏပြေး၊ တစ်ကောင်မှ ကြံ့ကြံ့မခံနိုင်ကြ။
အို ငါ့ခရီး တစ်ကောင်တည်းခရီး၊ ခရီးကြမ်း အကောင်းဆုံးပေါ့။
ကျယ်ပြောတဲ့ လေ ရိုင်းတဲ့ ကြယ်၊ ရှာပုံတော်ရဲ့ မွတ်သိပ်မှုသာ။
မောင်သာနိုး နိုင်ငံရပ်ခြားကဗျာ ခံစားမှုစာစု စာအုပ်မှ
I’mabad dog,amad dog, teasing silly sheep
But shut door, and sharp stone, andacuff, andakick, andahate.
Wide wind, and wild stars, and the hunger of the quest.